Cunto loogu talagalay dhammaan dadka reer Oregon - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Muddo aad u dheer, soogalootiga ayaa laga saaray barnaamijyada gargaarka cuntada. Hadda waa markii mudnaanta la siin lahaa gelitaanka jaarkayaga muhaajiriinta ah.
Waxaan aragnaa Oregon halkaas oo dadka oo dhan ay heli karaan cunto iyadoon loo eegayn meesha ay ku dhasheen ama xaaladdooda socdaalka. Aragtida, Oregon waxa ay dejisay barnaamij ay bulshadu naqshadaysay si loo xaqiijiyo sugnaanta cuntada ee uu gobolku maalgeliyo.; oo ay u dhisto dariiqa Oregon si ay uga jawaabto baahiyaha kale ee soogalootiga iyo qaxootiga.
Waxaan aragnaa Oregon, iyo waddan, leh nidaam socdaal oo loo siman yahay kaas oo hubinaya in heerka socdaalku aanu sii waarin faqriga oo xaddidaya gelitaanka shabakadeena badbaadada. Waxaan aragnaa mustaqbalka halka kaalmada cuntada ee ay bixiso gobolka ee dadka Oregon ee soogalootiga ah ay tahay tillaabada ugu horreysa ee dhammaan adeegyada la heli karo oo qof walba heli karo.
Si loo meel mariyo aragtideena Gaajada Xorta ah ee Oregon waxa ay ballan qaadaysaa hindise sannado badan ah oo diiradda lagu saarayo helitaanka cuntada soogalootiga.
2022, waxaan diirada saari doonaa aruurinta macluumaadka bulshada si aan u qeexno baahiyaha soogalootiga ay saameysay oo aan u aqoonsano xalka ay Oregon-ka-gaajadu u qaadan karto go'aan bixiyayaasha Oregon.
Gaajo-free Oregon waxay la kaashan doontaa ururada kale ee la fikirka ah si ay u sameeyaan isbahaysi, kordhinta taageerada iyo qofka-awoodda si ay isbedeladan run. Isbahaysigani waxa uu sanadka ugu horeeya ee ololahan ku qaadan doona marti gelinta fadhiyada dhageysiga bulshada, qorshaynta abaabulka bulshada, horumarinta hogaamiyayaasha bulshadeena, iyo bilaabi doona horumarinta istaraatiijiyad sharciyeed si aan u qaadno xalalkayaga go'aamada 2023.
Oregon-ka-gaajo-la'aanta, natiijada cuntada loogu talagalay dhammaan dadka Oregon, waxay:
In la dhiso iskaashi qoto dheer oo lala yeesho u doodista iyo hay'adaha u adeega ee uu soo galootigu hoggaamiyo.
Hoggaanka bulshada soogalootiga iyo qaxoontiga ee ku guulaystay, ujeedaduna tahay ka-qaybgal, abaabul iyo dhisidda awoodda si wadajir ah.
Shuruuc nakhshad wadaag ah oo balaadhisa helitaanka cuntada ee soogalootiga, abuura qaab taageero ah oo loogu talagalay bulshada soogalootiga iyo qaxootiga, oo keenta horumar dhab ah oo la taaban karo oo nolosha muhaajiriinta ah.
Kala shaqee bulshada soogalootiga ee Oregon si loo qaabeeyo oo loo horumariyo hindisahan waqti ka dib; natiijaduna waxay tahay, dhaqdhaqaaqa Oregon ee cadaalada soogalootiga waa uu sii xoogaysanayaa, wuxuuna diyaar u yahay inuu riixo isbeddelka soo socda ee ka sii kordhin doona BIPOC bulshooyinka soogalootiga iyo qaxootiga.
Deyrta / Jiilaalka 2021
Qorshaynta iyo horumarinta isbahaysiga
Fadhiyada dhageysiga bulshadaCilmi-baarista iyo horumarinta
Daah-furka ololaha iyo abaabulka xididdada
Diyaarinta sharciga kalfadhiga sharci dejinta 2023
Marabtaa inaad nagu soo biirto?
Ka qayb qaado ololahayaga.
Ku deeqo maanta
Joogso ilaa taariikhda
Ku biir liiskayaga boostada si aad u hesho wararka ololaha